Warbaahinta danwaa Media Network » Bishaaro Bulshada Degaanka:Bankii Habaar Waalid oo Laga Helay 3 Tog oo Dhulka Hoostiisa Mara
Bishaaro Bulshada Degaanka:Bankii Habaar Waalid oo Laga Helay 3 Tog oo Dhulka Hoostiisa Mara
August 18, 2013 - Written by Kismaayo office - Edited byKismaayo office Socdaalkii dheereaa ee uu Madaxwaynaha Dowalda Degaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Abdi Mahamud Omar ku maray 5 Gobal oo kamid ah Gobalada Dalka ayaa waxaa kasoo baxay Socdaalkii loogu wan-qalay Nolal iyo Rajo-rumays in uu madaxwynuhu ogaado baahida Shacabka iyo hormarka deegaanka.
Socdaalka ayaa waxa uu madaxwynu kumaray Dhul Masaafe ahaan kor udhaafaya 2200km oo isku wareeg ah waxa uuna madaxwynuhu ahaa safarkisan mid lugta ah oo gaadhi lagu wada maray gobalada .
Meelihii uu Madaxwaynuhu Maray waxaa kamid ahaa Banka wayn ee caanka ah ee lagu magacaabo Bankii Habaar-waalid kaas oo dhaca inta u dhaxaysa Tuulada Burqayar ee Degmada Dhanaan iyo Degmada Garbo ee Gobalka Fiiq.
Bulshada Degaanku Bankan waa ku caan oo waaa mid ay bulshadu kala kulanto caqabad xiliyada ay u kala gooshayaan Degaanada Garbo iyo Dhanaan waana mid dhulkani baaxadiisu wayntahay waa ban ay xoolu daaqaan oo cows iyo daaqsimeed ah.
Socdaalkii Nolal iyo Rajo-rumays kadib ayaa waxa uu Madaxwaynuhu Amray in khuburada Dhanka biyaha ku xeel dheer soo sahmiyaan Dhulka uu ku fadhiyo bankan wayn si ceelal looga qodo oo ay bulshadu ooga faa iidaysato daaqa kuyaala banka.
Khubaradii ayaa waxay soo heleen 3 tog oo waa wayn kuwaas oo dhulka hoostiisa mara dhamaana togagana ay yihiin kuwo biyo macaan natiijadan kasoo baxday khuburada biyaha baadhaysay ayaa waxay noqonaysaa mid farxad wayn iyo rayn rayn ku abuurtay bulshada Degaanka .
Kadib Natiijadii Khuburada ayaa waxa uu amray Madaxwyna DDSI in si deg deg ah loo qodo ceelasha biyaha loona soo saaro banaanka si ay bulshado ooga faa iidaysato soo saarita biyahan ayaa waxay noqonaysaa mid si wayn ay bulshada xoola dhaqatada ah ee kusugnaa agaasi oogu faraxayaan waxbadana kabadalaysa noalshoodii.
Talabadan Madaxwynaha ayaa waxay noqonaysaa sii dar dar galinta iyo kamidha dhalinta himiladii go’aankii ahaa dib ucurasho ee Gobalka DDSI looga cidhibtirayay Gaajada,jahliga iyo dhibaatada lafa bixisya Shacabka Deegaanka.
Dowlada Deegaanka Soomaalida ayaa waxay haatan haysaa tubtii hormarka iyo wadadii wax qabadka hadii ay kamidha dhaliso himiladii Dib ucuradshada waxa ay noqonaysaa Mid dhamaan Gobalada DDSI ka dhigta Dhul Barwaaqo Sooran ah.
Last reply was 3 months ago	wiilwaal weyteen	View
ascww. waan idin salamay bahda webka danwaanews.iyo inta webka akhrisata ee kuxiran bacda salaan waxaan si aan laqiyaasi karin ugu farxay warka sheegay in biyo laga helay burqayar iyo banka habaar waalid iyo guud ahaan hormarka kasoconaya DDSI aad baan warka u soo dhawayneyna illahbaa mahadaa iska leh.